မြန်မာစစ်သည်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်ခံထားရ — မြန်မာဌာန
မြန်မာစစ်တပ်ဟာ စစ်သည်တွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ တပ်ကထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း ထွက်ခ အဆမတန်ပေးကြရကြောင်း ဂျာမဏီအခြေစိုက် Deutsche welle သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူလိုက်ပြန်ပြီးတဲ့ နောက်၊ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို အင်အားသုံး ဖြိုခွဲခဲ့ ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ စစ်တပ်အရာရှိငယ်တဦးဟာ မိဘတွေကို အသိမပေးတော့ဘဲ၊ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကို ကျော်လွှားပြီး တဘက်နိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ လမ်းခရီးတလျှောက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ၊ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကို စွန့်စား ရှောင်ကွင်းခဲ့ရတာပါ။ ဖမ်းမိသွားခဲ့ရင်တော့ ထောင်ဒဏ်တသက် ကျခံနိုင် ရဖွယ်ရှိပါတယ်။ အရင်ကဆို သေဒဏ် အထိ ချမှတ်ခဲ့တာပါ။
အဲဒီအရာရှိငယ်ဟာ Deutsche Welle သတင်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်ပြေးအရာရှိသုံးဦးထဲက တဦးဖြစ်ပြီး၊ အခုတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ နောက်အရာရှိ နှစ်ဦးကတော့ ပြည်တွင်းမှာပဲ နေရာတွေရွှေ့ပြောင်း ပုန်းအောင်း နေကြတာပါ။ သူတို့ကို မြန်မာပြည်ရဲ့တင်းကြပ်တဲ့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေအောက်မှာ အရုပ်အသံတွေ ရအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေ ဆိုတာကိုတော့ သူတို့နဲ့ သူတို့ မိသားစုတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအရ ဖော်ပြမထားပါဘူး။
မြန်မာ့စစ်တပ်တွင်းလူမှုဘဝဟာ ပြင်ပလောကနဲ့ ကင်းပြတ်နေပြီး၊ တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတာ ဖြစ်သလို၊ အထက်အောက် ဆက်ဆံရေးကလည်း အဆင့်တဆင့်ကွာတာနဲ့ ဩဇာအာဏာကလည်း ကွာခြားသွားပါတယ်။ စစ်သည်တွေဟာ တပ်အခြေစိုက် စခန်းတွေမှာသာ နေထိုင်ကြရပြီး၊ အထက်အရာရှိတွေ ခွင့်ပြုမှ အပြင်ထွက်ခွင့်ရတာပါ။
စစ်သည်တွေနဲ့ တပ်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ဝတ်ဆင်၊ ပြောဆို၊ ယုံကြည်တာတွေကိုသာမက၊ ကိုယ့်ရဲ့ နေအိမ်ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ တန်ဆာဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အထိ စစ်တပ်က ညွှန်ကြားတာဖြစ်ကြောင်း၊ အချိန်မရွေး ကိုယ့်အိမ်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း၊ အိမ်ရှင်မတွေကိုလည်း ဒေါ်‌အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပါတီအရောင် ဖြစ်တဲ့ အနီရောင်ကို ဝတ်ဆင်ခွင့် မပြုသလို၊ တခြားနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သင်္ကေတတွေကိုလည်း သုံးစွဲခွင့် မပြု‌ကြောင်း၊ အရာအားလုံးကို စောင့်ကြည့်နေပြီး၊ လူတွေကို ကိုယ်ပိုင်တွေးမြင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ စက်ရုပ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်ချင်နေတာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒါ့ပြင် စစ်တပ်အတွင်း Facebook လူမှုကွန်ရက် သုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့လည်းရှိနေပြီး၊ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ နှစ်သက်ကြောင်း Like လုပ်တာ၊ ထပ်ဆင့်ဝေမျှတာ၊ တစုံတရာရေးသားတာ တခုချင်း ကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ စစ်သည်တွေ နဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ Facebook အကောင့် အသေး စိတ်တွေကိုလည်း အထက်ကို အသိပေးတင်ပြထားရပါတယ်တဲ့။ တကယ်လို့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ တင်မယ်ဆိုရင် ဖမ်းဆီးခံရမှာဖြစ်ပြီး၊ သီတင်းသုံးပတ်ကနေ တလအထိ အကျဉ်းချခံရမှာဖြစ်ကြောင်း တပ်ပြေးအရာရှိ တဦးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် NLD ပါတီကို ထောက်ခံတဲ့ ရေးသားချက်၊ စစ်တပ် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကို ဝေဖန်ချက်တွေကို ထပ်ဆင့် ကူးယူ ဖေါ်ပြသူ တွေလည်း ရာထူးမတိုးတော့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်က အရာရှိတွေကို CCTV အသုံးပြုစစ်ဆေး နည်း၊ တယ်လီဖုန်း ကြားဖြတ်နားထောင်နည်းတွေ သင်တန်းပေးခဲ့ကြောင်း အရာရှိနောက်တဦးက ဆိုပါတယ် တဲ့။ အငယ်တန်း စစ်သည်တွေဟာ ကျေးကျွန်တွေသဖွယ် ပြုမူ ဆက်‌ဆံခံရပြီး၊ သူတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေဟာလည်း အရာရှိတွေရဲ့အိမ်မှာ အိမ်စေတွေသဖွယ် အခမဲ့ လုပ်ကိုင် ပေးနေကြရတဲ့ပြင်၊ အနင်းအနှိပ်တွေပါ ပါဝင်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် မြန်မာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဘာသာခြားတွေ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီ ရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီး တပ်မတော်က ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေရတာဖြစ်ကြောင်း ဝါဒဖြန့်ချိနေတာလည်းရှိနေ ကြောင်း၊ အဲဒီလိုဝါဒဖြန့်ချက်တွေကို အယုံအကြည်မရှိပေမဲ့၊ အပြစ်ပေးခံရမှာကြောင့် ဆန့်ကျင်ပြောဆိုတာမျိုး တော့ မလုပ်ရဲကြောင်း အရာရှိနောက်တဦးက ပြောပါတယ်။
အခုတော့ တပ်မတော်ဟာ အိမ်‌ကြီးထဲမှာ အိမ်ငယ်ဆောက်၊ နိုင်ငံကြီးထဲမှာ နိုင်ငံလေးဆောက်တဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေ ကြောင်းလည်း သတင်းကဆိုပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်က စာရင်းအရ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ စစ်သည်အင်အား လေးသိန်း ခြောက်ထောင် ဝန်းကျင် နဲ့ ကမ္ဘာမှာ ၁၁ ခုမြောက် အကြီးဆုံး စစ်တပ်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။ တပ်မတော်ဟာ စစ်သည်တွေရဲ့ စဉ်းစားပုံကို ထိန်းချုပ်ထား ရုံမက၊ စစ်သည်တွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားတာပါ တဲ့။
စစ်သည် အဆင့်ဆင့်အားလုံးဟာ မလုပ် မနေရ နည်းလမ်းနှစ်ရပ်နဲ့ စစ်တပ်ပိုင် ကုမ္ပဏီတွေကို ထောက်ပံ့ပေးကြရပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အောင်မြင့်မိုရ်မင်း အာမခံကုမ္ပဏီမှာ အာမခံထားကြရတာပါ။ အဲဒီကုမ္ပဏီက စစ်တပ်ရဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီလိမိတက် MEC နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL တို့ ရဲ့ လက်ခွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေဟာ စစ်တပ်နဲ့ စစ်အရာရှိကြီးများ မိသားစုတွေကို အကျိုးပြု နေတာဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ စစ်တပ်ကနေ အငြိမ်းစားယူခဲ့ကြတဲ့ အရာရှိကြီးတွေဟာ အဲဒီ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုမှာ ထပ်မံလုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြပြီး၊ တခြားသူတွေကတော့ အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနတွေကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။
လုပ်ငန်းစဉ်အရကတော့ စစ်သည်တွေဟာ ၁၀ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးရင် နှုတ်ထွက်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဥပဒေမျှသာဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့မှာ မလွယ်ကူဘဲ တပ်က ထွက်ခွင့်ဟာ သုံးလေးနှစ် ကြာမြင့်ကြောင်း ဆောင်းပါးက ဖော်ပြပါတယ်။
Dr Su Su Myat says:
This article is true. I lived in army for long time. I can’t live their lives